Guyyaa Yaadannoo Gootota Oromoo Baga Ittiin Isin Gahe! Happy Oromo Martyrs Memorial Day, 15 April. #OromoMartyrsDay | OromianEconomist
Guyyaa Yaadannoo Gootota Oromoo Baga Ittiin Isin Gahe! Happy Oromo Martyrs Memorial Day, 15 April. #OromoMartyrsDay	April 15, 2020